Samsung kwupụtara mwepụta nke igwefoto MP nke 108 maka ekwentị mkpanaaka | Gam akporosis
Samsung nwere ihe dị na aka ọ ga-eweta n'oge na-adịghị anya ... na ee e, ọ gaghị adị n'ọtụtụ ụbọchị, izu ma ọ bụ ọnwa, mana n'ime awa ole na ole. Anyị na-ekwu maka gị 108 megapixel foto ihe mmetụta maka mkpanaka, nke a ga-eme ọkwa nke echi, Ọgọstụ 12.
Ebe ọ bụ ọ ga-arụ ọrụ n'oge na-adịghị anya, enwere ike na n'oge na-adịghị anya anyị ga-ahụ ekwentị mbụ na ahịa na igwefoto dị otú ahụ. Mgbe anyị kwuru obere oge, anyị na-ekwu na ọ ga-abụ n’oge ọ bụla n’afọ a. Kacha gosi iji kwadebe ya tupu ihe ọ bụla ọzọ ọnụ bụ Mi MIX 4 si Xiaomi.
IMX586 nke Sony na ISOCELL Bright GW1 nke Samsung bụ naanị ndị na-agba egbe 48 MP dị ugbu a maka ekwentị, yana ndị nwere mkpebi dị elu. Agbanyeghị, ọtụtụ ọnụ ọgụgụ ole na ole na-akwadebe ya ugbu a na-ewere foto 12 MP na ndabara, nke a bụ n'ihi na ha dabere na teknụzụ Quad Bayer ma ọ bụ '4 pikselụ na 1'.
Nọrọ na-ege ntị maka nnukwu akụkọ na-esote. Ọnwa Nke Asatọ 12, 2019. #OzoGenCapture pic.twitter.com/bE8treRBTD
- Samsung ISOCELL (@samsungisocell) August 9, 2019
Ihe mmetụta 108 megapixel Samsung (mkpebi 12,032 x 9,024p) nke Samsung ga-ejikwa teknụzụ Quad Bayer, ebe anyị anaghị atụ anya na ekwentị ga-ese foto dị oke, ọ bụ ezie na, dịka ndị na-ebu 48 MP, Ihe ngosi nke mkpebi ahụ nwere ike nyeere site na ọnọdụ Pro nke ngwa igwefoto dị iche iche ma ọ bụ ngalaba ọzọ. Nke a na-enye anyị echiche na The mobiles ga-ebu ya ga-enye 27 MP foto captures natively.
Ọ bụrụ na Xiaomi amalite Mi Mix 4 n’oge na-adịghị anya, mgbe ahụ afọ a, ngwaọrụ mbụ nwere ihe mmetụta sensọ MP 108 ga-abata, ma ọ dịkarịa ala n'ahịa ndị China. O doro anya ihe mmetụta mmetụta anyị na-eme ebe a, mana Samsung ga-ekpughere nkọwa niile ebe ahụ ma bụrụ echi, yabụ na anyị agaghị echere ogologo oge ịnụ banyere ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung ga-ebido ihe mmetụta igwefoto MP nke 108 maka smartphones echi